Kutongwa kwaMufundisi Evan Mawarire kwatanga neMuvhuro mudare repamusoro pamhosva yavari kupomerwa yekukurudzira kupidigurwa kwehurumende yaVaRobert Mugabe zvichitevera kuratidzirwa kwakaitwa neveruzhinji gore rapera.
VaMawarire vakatarisana neimwe mhosva yakadai zvichiteverawo kusungwa kwavakaitwa neSvondo.
Kutongwa kwaVaMawarire kwatanga mudare repamusoro muchuchisi wenyaya iyi, VaChris Mutangadura, vachiti VaMawarire vakakurudzira veruzhinji kuti vapandukire hurumende kuburikidza nemavhidhiyo avakatumira padandemutande reFacebook neTwitter vachikurudzira zvizvarwa zveZimbabwe kuti zvipinde mumigwagwa zvichiratidzira pamwe nekuramwa mabasa.
Vachiverenga mapepa ekupomera VaMawarire mhosva pakutanga kutongwa kwenyaya iyi nhasi, muchuchisi wenyaya iyi ati VaMawarire ndivo vakakonzera kuti zvikoro zvizhinji zvivharwe, vashandi varamwe mabasa uye kuti vamwe vanhu varatidzire zvine mhirizhonga mukati mukuratidzira kwemazuva maviri kwakaitwa gore rapera kuchitungamirwa nesangano reHashtag ThisFlag rinotungamirwa naVaMawarire.
Asi VaMawarire vati vari kuramba mhosva yavari kupomerwa. Vachiverenga zvikonzero zvekuti sei VaMawarire vari kuramba mhosva, gweta raVaMawarire, VaHarrison Nkomo, vaudza dare kuti yaive kodzero yemusungwa kuratidza kusafara kwake nematongerwo ari kuitwa nyika achiita izvi murunyararo.
VaNkomo vatiwo chinangwa chemusungwa chaive chekuti zvinhu zviri kunetsa munyika zvigadziriswe kwete kuti vaironga zvekupidigura hurumende yakasarudzwa.
VaMutangadura vazivisawo dare kuti VaMawarire vave kufanira kugara mujeri vachitongwa sezvo zvirizvo zvinotaurwa nemutemo kana munhu achipomerwa mhosva yakakura kudai.
Izvi zvabva zvapa VaNkomo vasvitse chikumbiro chekuti VaMawarire vatongwe vachibva kumba izvo zvanga zvichipikiswa nemuchuchisi wenyaya iyi uyo anga achiti VaMawarire munhu ane nhoroondo yekupara mhosva dzakafanana neyavari kupomerwa.
VaMutangadura vati hazvikodzere kuti VaMawarire vapihwe mukana wekubhadhara mari yechibatiso sezvo vakasungwa nezuro vachipomerwawo mhosva yakafana neyavari kutongwa nayo pari zvino.
Asi VaNkomo vapikisa izvi vachiti VaMawarire havafanire kunyimwa nepamusana pemhosva yavasati vapomerwa zviri pamutemo uye yavasati vabatwa nayo izvo zvatambirwa nemutongi wedare Muzvare Priscilla Chigumba.
Muzvare Chigumba vati VaMawarire havafanire kunyimwawo mukana wekubhadhara mari yechibatiso sezvo munhu achinzi haana mhosva kudzamara abatwa nemhosva nematare.
Mumutongo wavo, Muzvare Chigumba vati mari yakabhadharwa naVaMawarire inoita madhora mazana maviri pamwe nepasipoti yavo izvo zvakabatwa nedare zvirambe zviri mumawoko edare uye kuti vawunze mapepa emba yevabereki vavo yekuKwekwe achengetwe nedare kusvika nyaya iyi yapera kutongwa.
Zvichakadai hurumende yashevedza mufakazi wayo wekutanga panyaya iyi anove mupurisa akaferefeta nyaya iyi, VaEdmore Muchineripi Runganga kuti vape hombowo hwavo kudare.
VaRunganga vati kunyange hazvo yaive kodzero yaVaMawarire kuti vataure zvavanoda pamusoro pematongerwo ari kuitwa nyika, kurudziro yavo yekuti vanhu varatidzire mukuratidzira kwaidaidwa Zimbabwe Shutdown kwakaitwa kwemazuva maviri muna Chikunguru gore rapera, kwakatyorawo kodzero dzevanhu vakaita sevana vechikoro avo vavati vakamanikidzwa kuenda kuchikoro nekutya kuratidzirwa kwaiitwa neveruzhinji.
VaRunganga vaburitsawo mavhidhiyo mana avati anoratidza VaMawarire vachitaura vachikurudzira kuti veruzhinji vapandukire hurumende.
Asi VaNkomo varamba kuti mavhidhiyo aya atambirwe nedare sehumbowo vachiti musungwa kana ivo segweta riri kumirira musungwa havasati varatidzwa mavhidhiyo aya nehurumende sezvinodiwa nemutemo, izvo zvatambirwa nemutongi.
Zvichakadai, VaMawarire vacharamba vari muhusungwa zvichitevera kusungwa kwavakaitwa nezuro vari pakati pekuparidza muchechi yavo yeHis Generation iri mumusha weMilton Park muHarare.
Vari kupomerwa zvakare mhosva yekukurudzira vanhu kuti vapandukire hurumende nepamusana pekunetsa kwave kuita mafuta edzimotokari nekushayikwa kwezvinhu muzvitoro pamwe nekushayikwa kwemari mumabhanga.
VaNkomo vati VaMawarire vanotarisirwa kumiswa pamejasitiriti neChipiri vachipomerwa mhosva iyi maawa makumi mana nemasere akatarwa mubumbiro remitemo asati adarika.